Showing posts with label ပြည်တွင်း. Show all posts
လူတိုင်းသိသင့် ကြည့်ထိုက်သော ဘွဲ့ဝတ်စုံ သမိုင်း နိပ်ကြည့်ရန်
ဇေယျာသူရ10:03:00 PM =================== =================== ဘွဲ့နှင်းသဘင် ကျင်းပခြင်း၊ အခမ်းအနားတွင် ဝတ်စုံဝတ်ဆင...Read More
အဝတ်ဗလာနဲ့ လူသေအလောင်း ထပ်မံတွေ့ရှိ နိပ်ကြည့်ရန်
ဇေယျာသူရ9:44:00 PM ရေမြောင်းအတွင်း ပုတ်ပွသေဆုံးနေသည့် လူသေအလောင်း တလောင်းတွေ့ရှိ -------------...Read More
သေနတ်သမားကြည်လင်းကို ကားပေါ်ကဆွဲချပြီးဖမ်းဆီးတဲ့ ရုပ်သံထွက်ပေါ် ဇေယျာသူရ11:56:00 PM
သေနတ်သမားကြည်လင်းကို ကားပေါ်ကဆွဲချပြီးဖမ်းဆီးတဲ့ ရုပ်သံထွက်ပေါ် Reviewed by ဇေယျာသူရ
မြန်မာပြည်မှာ တိုက်လေယာဉ် ထုတ်တော့မည် ဇေယျာသူရ7:39:00 PM ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ JF ၁၇ ဘက်စုံတိုက်လေယာဉ်မျိုး မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်ခွင့်နဲ့ ပတ...Read More
မြန်မာပြည်မှာ တိုက်လေယာဉ် ထုတ်တော့မည် Reviewed by ဇေယျာသူရ
ရဲကားနဲ့အတိုင်ပင်ခံရုံးကကားတိုက်မိတဲ့ အဖြစ်အပျက်များ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဂယက်ခက်
ဇေယျာသူရ4:50:00 PM နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁။ ။ Grand Tiger အမှတ်တံဆိပ်ပါ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ မှာ အသုံးပြုတဲ့ ကား...Read More
ဦးကိုနီရဲ့ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း နိပ်ကြည့်ရန် ဇေယျာသူရ11:47:00 PM ဦးကိုနီရဲ့ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း ဦးကိုနီကို ဖခင် ဦစူလတန်၊ မိခင် ဒေါ်ခင်လှ (ခ) ဒေါ်ဟလီမာတို့က စစ်ကို...Read More
ဦးကိုနီရဲ့ ကိုယ်ရေး အကျဉ်း နိပ်ကြည့်ရန် Reviewed by ဇေယျာသူရ
ever smile mobile ဖုန်းဆိုင်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပုပ်ပွ သေဆုံး ပုံများထွက်ပေါ်
ဇေယျာသူရ10:55:00 PM 23.1.2017 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရတနာလမ်းပေါ်တွင်ရှိသော ever...Read More
အမြန်​လမ်း ကားမီးလာင်​မှုဖြစ်​စဉ် . ကိုဝင်းထွန်းဘက်မှ တံခါးကိုသွားဖွင့်ပြီး ဆွဲထုတ်ရာ ခြေထောက်ညပ်ပြီးး ထုတ်မရသဖြင့် ကိုဝင်းထွန်းမှ သူ့ကိုမထုတ်ပဲ နောက်ခန်းမှလူများ ကိုကယ်ရန် ပြော... . အပြည့်အစုံကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။
ဇေယျာသူရ9:40:00 PM အမြန်​လမ်း ကားမီးလာင်​မှုဖြစ်​စဉ်​ ​နောက်​ဆုံးရ..သတင်း ဇန်​နဝါရီ ၂၃-ည၇း၃၀ (၂၁.၁.၂၀၁၇) နေ့ အမြန်လမ...Read More
ဘောလုံးဘားတန်းကိုထိအောင် ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် ကန်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မွန် ကလေးငယ် ထိုင်းအသင်းစိတ်ဝင်စား ဇေယျာသူရ5:09:00 AM အသက် ၇ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ မွန်လူမျိုး ဘောလုံးပါရမီရှင် ကလေးငယ်တဦးဟာ ထိုင်းဘောလုံးကလပ်တွေ...Read More
ဘောလုံးဘားတန်းကိုထိအောင် ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် ကန်နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား မွန် ကလေးငယ် ထိုင်းအသင်းစိတ်ဝင်စား Reviewed by ဇေယျာသူရ
နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးရဲ့မတော်ရာကိုလက်နဲ့ ထိုးသူထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ်ကျ" ဇေယျာသူရ8:25:00 AM __________ "ရန်ကုန် ဇန်န၀ါရီ ၅။ အိမ်နီးချင်းအမျိုးသားတစ်ဦးက နှစ်နှစ်နဲ့ ငါးလအရွယ်ကလေးမလေး...Read More
နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးရဲ့မတော်ရာကိုလက်နဲ့ ထိုးသူထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ်ကျ" Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဇေယျာသူရ4:29:00 PM ကိုစိုးနောင်အား မီးဖိုချောင်အတွင်းသို့ သေနတ်ထောက်ခေါ်လာပြီး ဓားသမားမှ အနည်းငယ်ပုန်းကွယ်ရာမှ ယုတ...Read More
အဖေအရင်းဖြစ်သူကသမီးအရင်းကိုမုဒိန်းကျင့် နိပ်ကြည့်ရန် မြန်မာပြည်က ဖြစ်ရပ်
ဇေယျာသူရ5:41:00 PM ကျေးရွာအချို့တွေမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေ ကြတာလဲ ဗျာ အင်းတော်ကြီးနန့်မွန်းကျေးရွာ ကျောက်စရစ...Read More